07/01/2011 - 08/01/2011 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကချင်ပြည်နယ်အစိုး ​ရဟာ ​ကေအိုင်အိုနဲ့​ အစိုး​ရတပ်​တွေအကြား​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​ရေး​ကို ​ကေအိုင်အို​ခေါင်း​ဆောင်​တွေဘက်က လက်မှတ်ထိုး​ပါမယ်လို့​ ကတိစကား​မရ​သေး​တဲ့​အကြား​က လူငါး​ဆယ့်​ရှစ်ဦး​လွှတ်ပြီး​ လက်မှတ်ထိုး​ပွဲလုပ်ဖို့​ အ​ကြောင်း​ကြား​လာတယ်လို့​ ​ကေအိုင်အိုက ​ပြောပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ အစိုး​ရဘက်က အပစ်ရပ်​ရေး​ဆောင်ရွက်တဲ့​ ဗိုလ်မှူး​ကြီး​သန်း​အောင်အပါအဝင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုး​ရ အဖွဲ့​ဝင် ​လေး​ငါး​ဦး​လည်း​ ပါတယ်လို့​ပြောခွင့်​ရသူ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
“ဟုတ်တယ် သူတို့​ အဲဒါ စာရင်း​နဲ့​တောင် ​ပေး​လာကြတယ်။ သူတို့​က​တော့​ ဒီ​နေ့​ မနက် ထင်တယ် လာမယ်။ လက်မှတ်ထိုး​ရ​အောင် သူတို့​က ​ပြောကြတယ်။ သူတို့​က သိတဲ့​အတိုင်း​ပဲ ဒီအတိုင်း​ လွယ်လွယ်နဲ့​ လက်မှတ်ထိုး​ဖို့​ စီစဉ်​နေကြတဲ့​ သ​ဘော ထင်တယ်ဗျာ။ လူအား​လုံး​က ၅၈ ဦး​ရဲ့​ နာမည် စာရင်း​ ပို့​လိုက်တယ်ဆို​တော့​ အဲဒါ သူတို့​လည်း​ အုပ်စုလိုက် လာမှာ​ပေါ့​။ အဲဒီ လက်မှတ်ထိုး​ပွဲမှာ ဆန္ဒနဲ့​ အမှန်တကယ် ဖြစ်သင့်​တာက​တော့​ တခြား​စီပါ။ အမှန်တကယ်ဖြစ်သင့်​တာက ညှိနှိုင်း​စရာ​တွေ အများ​ကြီး​ ရှိပါ​သေး​တယ်။”
ကေအိုင်အိုအ​ နေနဲ့​က​တော့​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​ရေး​လက်မှတ်မထိုး​ခင်မှာ နှစ်ဘက် အပြန်အလှန်​ဆွေး​နွေး​ရမယ့်​ကိစ္စ​တွေ အများ​ကြီး​ရှိ​သေး​တယ်လို့​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
ဇွန်လ ၉ ရက်မှာ ပြန်စတင်တဲ့​ ​ကေအိုင်အိုနဲ့​ အစိုး​ရအကြား​ တိုက်ပွဲဖြစ်ကတည်း​က အပစ်ရပ်​ရေး​အတွက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုး​ရဖွဲ့​ထား​တဲ့​ ဗိုလ်မှူး​ကြီး​သန်း​အောင် ဦး​ဆောင် ကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​နဲ့​ ​ကေအိုင်အိုဘက်က ဒုစစ်ဦး​စီး​ချုပ် ဗိုလ်မှူး​ချုပ် ဂွမ်​မော်ဦး​ဆောင်တဲ့​အဖွဲ့​ တကြိမ်​တွေ့​ဆုံခဲ့​ပါတယ်။ ကျန်အကြိမ်​တွေကို​တော့​ ​အောက်​ခြေကိုယ်စား​လှယ်​တွေ ​စေလွှတ်တာရှိသလို အပြန်အလှန်စာ​ရေး​နေကြပါတယ်။
ကေအိုင်အိုဘက်က အပစ်ရပ်​ရေး​အတွက်လိုအပ်ချက်သုံး​ချက်ကို တင်ပြပါတယ်။ ဒါ​တွေက​တော့​ (၁) ​ကေအိုင်အိုတဖွဲ့​တည်း​မဟုတ်ဘဲ တနိုင်ငံလုံး​အပစ်ရပ်ရန်။ (၂) နိုင်ငံ​ရေး​အရ ​ဆွေး​နွေး​ဖြေရှင်း​ရန်ဆိုတဲ့​ အချက်နှစ်ချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကိုင်စွဲပါတယ်။ (၃)ဥပမာအား​ဖြင့်​ တရုတ်နိုင်ငံလို ကြား​နေနိုင်ငံတခုခု​ရှေ့​မှာ ​ဆွေး​နွေး​ရ​အောင် စတာ​တွေကို တင်ပြပါတယ်။ အစိုး​ရဘက်က​တော့ ကချင်တပ်​တွေကို အပစ်ရပ်ခိုင်း​တာ၊​ စခန်း​တွေကို မတိုက်ဖို့၊​ ယာယီအပစ်ရပ်​ရေး​လက်မှတ်ထိုး​ရေး​​တွေဖြစ်ပါတယ်။
မ​နေ့​က​တော့​ ​ကေအိုင်အိုက သူတို့​မူလရပ်တည်ချက်နှစ်ရပ်ထဲက အ​သေး​စိတ်နှစ်ချက်ကို ထပ်မံတင်ပြခဲ့​တယ်လို့​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။ အပစ်ရပ်​ရေး​လက်မှတ်ထိုး​တဲ့​အခါ အပစ်ရပ်​ရေး​ကို အဓိပ္ပာယ်​ဖော်တဲ့​ သ​ဘောတူချက်တခုကို ထပ်မံထိုး​ဖို့​နဲ့​ သမ္မတဦး​သိန်း​စိန်က ဒီကိစ္စကို တာဝန်ယူဖို့​ ဆိုတာကို ​ကေအိုင်အိုက ကမ်း​လှမ်း​ခဲ့​တယ်လို့​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
“နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ​ရပ်စဲ​ရေး​ သ​ဘောတူညီချက်အ​ပေါ် နား​လည် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်​ဆိုချက်ဆိုတဲ့​ဟာ ကျ​နော်တို့​ ထည့်​လိုက်တယ်။ နိုင်ငံအတွင်း​ရှိ ပစ်ခတ်တိ်ုက်ခိုက်မှုများ​အား​လုံး​ ရပ်ဆိ်ုင်း​ပြီး​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ရရှိရန် ​ဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံ​ရေး​ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​မှု အစီအစဉ်များ​ကို နိုင်ငံ​တော်အစိုး​ရမှ ရက်​ပေါင်း​ ၁၅ ရက်အတွင်း​ ​ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်​ပေး​ရန် လိုအပ်ပါသည် ဆိုတဲ့​ အချိန် အကန့်​အသတ်​လေး​ တခု ​ပေါ့​နော်၊​ အဲဒါ ထည့်​လိုက်တယ်။ ဒါက​တော့​ ဒီနိုင်ငံ​တော်အစိုး​ရက​နေ အမှန်တကယ်ပဲ ဒီ ပြည်တွင်း​မှာ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒါက သူတို့​ လုပ်နိုင်တဲ့​ ကိစ္စ​တွေပဲ။ အဲဒါကို ကျ​နော်တို့​တောင်း​ဆိုတာ ရှိတယ်။”
အခုလို ​ကေအိုင်အိုဘက်က ​ခေါင်း​ဆောင်​တွေက အပစ်ရပ်​ရေး​ သ​ဘောတူလက်မှတ်ထိုး​ဖို့​ကိစ္စကို ​ဆွေး​နွေး​စရာ​တွေကျန်​သေး​တဲ့​အတွက် ချက်ချင်း​ လက်မှတ်မထိုး​နိုင်​သေး​ဘူး​လို့​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိတ်ဖွင့်စာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ပဋိပက္ခများနှင့် ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်
တည်ဆောက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။
အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တို့သို့ လိပ်မူပြီး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပေးပို့စာ၌ "ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများနှင့်ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထားသော နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးသည်
နှစ်ပရိစ္ဆေဒများစွာကပင် တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက် အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသော ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အားလုံး
ချစ်ကြည်ရင်းနှီး သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း" စသဖြင့် အစချီရေးသားခဲ့ပြီး၊ "ယခုအခါ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်နှင့် မွန်စသည့် ပြည်နယ်များတွင်
တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း ကြားသိနေရပါသည်။ ယင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် သေကြေဆုံးရှုံး
ပျက်စီးမှုများ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် အပြင် တန်ဖိုကြီးမားသည့် နိုင်ငံပိုင် အဆောက်အဦများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။
ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများလည်း အတိဒုက္ခများစွာ ရောက်နေကြသည့် အပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုပါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မည့် အန္တရာယ်ရှိနေပါသည်" ဟု ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ယင်းပဋိပက္ခများနှင့် ပြဿနာများကို အင်အားသုံး၍ ဖြေရှင်းကြမည်ဆိုလျှင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဆုတ်ယုတ်မှုများသာ ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို စစ်ရေးနည်းဖြင့် တည်ဆောက်၍ မရနိုင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း ဖြစ်သော ဆွေနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သာ တည်ဆောက် သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း ကြမှသာလျှင် ပြည်ထောင်စုကြီး
အနာဂတ်ကို အာမခံနိုင်မည့် စစ်မှန်သော တိုင်းရင်းသား သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းပြေလည်မှု မရရှိလျှင် ပြည်တွင်းစစ်မီး ဟူသည် ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိတတ်ကြောင်း ဆက်လက်ရေးသားထားပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ပြည်ထောင်စုသား အချင်းချင်း အကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ အပြန်အလှန်
ယုံကြည်လေးစားမှုတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းကြမည်ဆိုလျှင် ပြေလည်မှုရရှိကြပြီး ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှသာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရေးသားခဲ့ပါသည်။
အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်နေကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားများကို ရှေးရှု၍ ယခုဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများကို
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းကြပါရန်နှင့် အမြန်ဆုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲကြပါရန် လေးနက်စွာ ပန်ကြားအပ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပြီး၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို
ပံ့ပိုးရန်အတွက် မိမိအနေဖြင့် ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ပါဝင်ကြိုးပမ်းပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ တရားဝင်လမ်းကြောင်းမှ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို
ဆက်သွယ်ရန်လမ်းကြောင်း မရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေးမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနမှ
ဦးအုန်းကြိုင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါသည်။
သောက်ရေသန့် (PH 7) တံ ဆိပ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ထုတ်လုပ် သော ကြော်ငြာတစ်ခုတွင် ကြော် ငြာပါ မော်ဒယ်အမျိုးသမီး ၂ ဦး၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ကိုယ် နေဟန်ထားတို့အရလည်းကောင်း၊ PH7ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း ကြော်ငြာတွင်ပါဝင်သည့် စာတမ်း အရလည်းကောင်း ပြင်ပတွင် ၄င်း တံဆိပ်နှင့်ရောင်း ချနေသည့် အရက် ကြော်ငြာသဖွယ်ဖြစ်နေသဖြင့် ပုံနှိပ် ဖော်ပြခွင့် မပြုကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ”တကယ်တော့ အားကစား ဂျာနယ်တွေဆိုတာ လူမှုရေးဦးတည် ချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် အဓိက အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ စာစောင် တွေပါ။ ဒီလိုစာစောင်တွေမှာ ကျန်း မာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ကို ပျက်ယွင်းစေတဲ့အဖျော်ယမကာ နဲ့တံဆိပ်တူသောက်ရေသန့်ကို ခုတုံး လုပ်ပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်ရင် ဘယ်လိုမှ မသင့်လျော်တဲ့ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှု၊ ကိုယ်နေဟန်ထားတွေ နဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဗန်းပြပြီး ယမကာကြော်ငြာတွေမှာ ထည့် သွင်းလေ့ရှိတဲ့စာသားတွေ ထည့် ဖော်ပြပြီး ကြော်ငြာတာမျိုးကို ခွင့် မပြုပါဘူး။ ဖော်ပြလာရင်လည်း လို အပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု စာပေ စိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြား သွားသည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ”အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်ကြော်ငြာတွေကို လုံးဝဖော်ပြခွင့်မပြုတော့တာ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရ်ီလ ၁ ရက်နေ့က တည်းက ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီတုန်းက စာအုပ်၊ စာစောင်တွေပြင်ဆင်ချိန် ရအောင် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်၊ အောက် တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ် ကြိုတင်အသိပေးကြေညာပြီးမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ” ဟု ဆိုသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံ တင်ဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင်လည်း မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်အရလည်း ကောင်း၊ တစ်မျိုးသားလုံး စိတ်ဓာတ် နှင့် အကျင့် စာရိတ္တမြင့် မားရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်လည်း ကောင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြရန် မသင့်လျော် သည့် ကြော်ငြာများနှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ”အရက်၊ ဘီယာတွေ ထုတ် လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက အခြားလူသုံး ကုန်ပစ္စည်းတွေ ကြော်ငြာတဲ့အခါ ကြော်ငြာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ မသက် ဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပုံတွေ ဗန်းပြ ကြော်ငြာတာမျိုး၊ အရက်၊ ဘီယာ နဲ့ပတ်သက် ဆက်နွှယ်မှုရှိစေနိုင်တဲ့ ပုံ၊စာသားတွေထည့်ကြော်ငြာတာမျိုး နဲ့ ပရိသတ်ကို မလှည့်စားသင့်ပါ ဘူး။ ဒါတွေကို ပုံနှိပ်မီဒီယာမှတင် တားမြစ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနေရာအနှံ့မှာ ရှိနေတဲ့ Billboard တွေ၊ Vinyl Sign Board တွေမှာလည်း ထိန်းချုပ်တားမြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ င်္ဃြဃှု လိုအသင်းကြီးကပါ စီး ပွားရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ၊ လုပ် ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် အသိပေးမြှင့်တင်မှုလုပ်ပေး မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးထိရောက် အောင်မြင်မှာ အမှန်ပဲ” ဟု စိစစ် သုံးသပ်တင်ပြရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအ စည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ ”အရင်တုန်းက လက်ဖက် ရည်ဆိုင်တွေ များသလောက် အခု အရက်ဆိုင်တွေ၊ ဘီယာဆိုင်တွေ များလာပြီး လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ထိခိုက်ရုံမကဘဲ စာရိတ္တပါ ချို့ ယွင်းလာကြတာ ဒီကြော်ငြာတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုက ဘယ်လောက် တောင်ရှိသလဲဆိုတာ တွေးကြည့် စရာတောင်မလိုပါဘူး” ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ အဆိုပါကြော်ငြာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ သည့် ဂျာနယ် ၂ စောင်ကိုလည်း သတိပေးခဲ့ပြီး အသိပေး ကြေညာ ချက်အား စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံ တင်ဌာနက ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းနှင့် ချိုးဖောက်ပါက ထိရောက်စွာအရေး ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၄၇ နှစ်မြောက် နှစ် ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ စမ်း ချောင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းတောကျောင်း တိုက်၌ကျင်းပခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်မပျက် ကျင်းပလေ့ရှိသော ဆရာကြီးသခင် ကိုယ်တော် မှိုင်း အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားစာပေအနုပညာရှင်များ လည်း တက်ရောက်ခဲ့ သည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ် ဆရာကြီးသခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း ကိုယ်တိုင်ရေး သားသည့် ”ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြန် လည်တည်ဆောက်ရာတွင် တစ်ဦး အပေါ်တစ်ဦး မလို မုန်းထား အာဃာ တတရားများကို ဖယ်ရှား၍ သူမနာ ကိုယ်မနာကိုယ်ချင်းစာမေတ္တာတရား ကို ပွားများကာ မညီမညွတ်မသင့် မတင့် ပဋိပက္ခဖြစ်မှုမှန်သမျှကို ရပ်စဲ ကြရန် အချိန်ကျရောက်လျက်ရှိ ပေပြီ”ဟူသော ဆရာကြီးဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းသော ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး (၈)ဦးကော်မတီ၏ ပန်ကြားချက်ကို ပြန်လည်ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တက်ရောက်လာ သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှ ကဗျာဆရာ ကြီးဦးအံ့မောင်က ဆရာကြီးဒဂုန် တာရာ၏ ၉၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်ကြားလွှာ၊ ကဗျာ ဆရာမောင်စိမ်းနီ၊ ကဗျာဆရာ မောင်လင်းရိပ်နှင့် ကဗျာဆရာ မိုးဦး ဆွေညိန်းတို့က ဆရာကြီးသခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ မဟာလေးချိုးကြီး ၃ ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ယင်း အပြင် လူငယ်တေးဂီတအဖွဲ့တစ်ခုမှ လည်း ဆရာကြီးသခင် ကိုယ်တော် မှိုင်းအား ရည်စူးရေးစပ်ထား သော ခေတ်ပေါ်သီချင်းနှစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လမ်းပြသူနှင့် သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း သီချင်းတို့ကို သီဆို ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ”ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော် မှိုင်း အမှတ်တရပွဲက ဒီနှစ်နည်း နည်းထူးခြားတယ်။ အရင်နှစ်တွေ တုန်းက တက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့် သည်တွေကို မုန့်ဟင်းခါးကျွေး တယ်။ အလာပသလာပ ပြော ကြတာမျိုး ပဲရှိတာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် လောက် မတိုင်မီ က ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုခ်မှာရှိတဲ့ ဆရာကြီး ရဲ့အုတ်ဂူမှာလုပ်တုန်းကလည်း သိပ် ထူးထူးခြားခြားမရှိခဲ့ဘူး။ ဒီနှစ် တော့ အလွန်အင်မတန်ငယ်တဲ့လူငယ်တွေက ဆရာကြီးအမှတ်တရသီချင်းတွေဆိုကြ တယ်”ဟုကဗျာဆရာကြီးဦးအံ့မောင် ကပေါ်ပြူလာနယူးစ်သို့ ပြောသည်။ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အောက်မေ့ပွဲကို ဆရာကြီးမိသားစု ဝင်များနှင့် ဆရာကြီးအား လေးစား သူများက ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်းဖြစ် ပြီး လက်ရှိတွင်ဆရာကြီးသခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ မြေးမြစ်တီတွတ် ပေါင်း ၆၂ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကျောက် စိမ်းလုပ်ငန်းရှင်များသည် ကျောက် စိမ်းတူးဖော်ထွက်ရှိရာ ဖားကန့် ဒေသ ကျောက်ဝိုင်းများသို့ တိုက် ရိုက်လာရောက်ဝယ်ယူကြသော ကြောင့် အရောင်းသွက်လျက်ရှိ ကြောင်းသိရ သည်။”အရင်က မန္တလေးကုန်သည် တွေနဲ့ပဲ ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ကြတယ်။ ခုက ရန်ကုန်ကနေ တိုက်ရိုက် တက် ဝယ်ကြ တော့ ဈေးကွက်ကောင်းနေ တယ်။ ကျောက်မျက်ပြပွဲပြီးက တည်းကဈေးကွက် ကောင်းနေ တယ်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကလည်း နီးလာ တော့ နှစ်သစ်ကူးအမီ ဝယ်ကြ တာ လည်းပါတယ်။ ဈေးကွက် တော်တော် ကောင်းနေတယ်” ဟု ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းဝယ်ရောင်းလုပ်နေသူ ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြော သည်။ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းဈေး ကွက်သည် နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံး ပတ်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ ခဲ့သော ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ၌ စံချိန်တင်ရောင်းချရမှုအပြီးတွင် အနည်းငယ် လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး ကျောက် စိမ်းအဓိကဝယ်လက်ဖြစ်သော တရုတ်ကုန်သည်များအပြင် ဗီယက် နမ်ကုန်သည်များကပါ အဝယ်လိုက် လာသောကြောင့် ၄င်းတို့နှင့် တိုက် ရိုက်ချိတ် ဆက် နိုင်သော ရန်ကုန် ကျောက်စိမ်းကုန်သည်များက ဖား ကန့်အထိ လိုက်ဝယ်နေခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။”ကျောက်သားကတော့ အမျိုး အစားအလိုက် အ ရောင်း အဝယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျောက်သား အ မြင့်ထဲမှာဆိုရင် အသားဆန်းနဲ့ ဘော်ဒီသားကတော့ အရောင်းအ ဝယ် အဖြစ်ဆုံးပဲ” ဟု လုံးခင်ရှိ ကျောက်စိမ်းကုန်သည် တစ်ဦးက ပြောသည်။ကျောက်စိမ်း ဘော်ဒီသားတွင် မှန်သား၊ ဖန်သား၊ ရေသားဟူ၍ ၃ မျိုးရှိပြီး ယင်းကျောက်သားများ အနာလွတ်ပါက သိန်းရာဂဏန်းထိ ဈေးရှိကြောင်း သိရသည်။လက်ရှိဖားကန့်ကျောက်စိမ်း ဈေးကွက်အဝယ်လိုက်နေခြင်းမှာ မတ်လတွင် ကျင်းပမည့် ကျောက် မျက်ရတနာပွဲကြီးတွင် ပြသရောင်း ချရန်အတွက် ဝယ်ယူနေကြခြင်း လည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်အခြေ စိုက်ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး က သုံးသပ်သည်။
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးက အခုလို ပြောဆို သွားတာပါ။ ဦးတင်အေးက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို သင်ခန်းစာ ယူပြီး ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၆ ခု က ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပါတီတစ်ခုကို ၂ မိနစ်ခန့် တင်ပြ ခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ RNDP ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောပါတယ်။ မနက် ၁၀ နာရီလောက်က စပြီး ကျင်းပပြီး ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ၃၇ ပါတီ အနက်က ၃၆ ပါတီ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီက ဦးသိန်းတင်အောင်တယောက်သာ တက်ရောက်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးနဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးတိုတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP က ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက အခြေအနေတွေကို သုံးသပ် တင်ပြ ဆွေးနွေးပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တခြား နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ ကလည်း ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေ နဲ့တခြားအချက်တွေကို တင်ပြ ဆွေးနွးခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သလို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်လှိုင်က ပြန်လည်သုံးသပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
စနေနေ့၊ နံနက် ၁၀နာရီအချိန် တွင် ဟင်္သာ တမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်နိုင် နှင့်တွေ့ဆုံခွင့် ရပါသည်။ ဟင်္သာတမြို့ရေကြီး ရေလျှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လူအသေအပျောက် မရှိကြောင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ လည်း အားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ ခဲ့ကြောင်း၊ ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီး လည်းလာရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါ သည်။
ဟင်္သာတမြစ်ရေကြီးမှု အတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ သော ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း သဗ္ဗသိဒ္ဓိဓမ္မာရုံ၊ ရတနာပုံကျောင်း၊ ဒေါ်စောဂိုဒေါင်၊ အ.လ.က (၂) တို့တွင်လည်း အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဆင်ပြေ အောင်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြောင်းကို မြ၀တီရပ်ကွက်နှင့် ကနောင်စု ရပ်ကွက်မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ကပြောခဲ့သည်။
၁၈ ရက်မှ စတင်ပြီး ၁၉ ရက်တွင် အသည်း အသန်ရွာ သွန်းခဲ့သော မိုးရေချိန်မှာ ပြီးခဲ့သည် ၂၉ နှစ်က ရရှိခဲ့သော မိုးရေချိန် ၇ လက်မ ကျော် ထက်စံချိန် ပိုများခဲ့သည် ဟုသိရသည်။ မြ၀တီ မိုးလေ၀သမှ တိုင်းတာချက် မှာ ၆ ဒသမ ၅ လက်မရှိသည်ဟု သိရသည်။ နေ့လယ် ၂ နာရီ ရန်ကုန်သို့ အချိန်မီပြန်လည် ပြင်ဆင်နေသည့် အချိန်တွင် ဟင်္သာတမြို့သို့ ရထား ဆိုက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ “ အောင်ဆန်းဂျာမွန်း ” ဟု အမည်ပေးထားသော စာကြည့်တိုက်နှစ်ခုကို ဩဂုတ်လ ဒုတိယပတ်တွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ၏ ပဲခူးမြို့နယ် စည်းရုံးရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်လှက ပြောသည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်အတွင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည်နယ်သို့ ခရီးထွက်စဉ် ကြားသိခဲ့ရသည့် ကချင်
ဝေါဟာရ တခုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အတွက် စာကြည်တိုက် အမည်ကို
အောင်ဆန်းဂျာမွန်းဟု ပေးဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးမြတ်လှက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်တော့ ကချင်မလေးတွေက အော်တယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ “ အောင်ဆန်းဂျာမွန်း ” ဟု အမည်ပေးထားသော စာကြည့်တိုက်နှစ်ခုကို သွားရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်
တဲ့။ အောင်ဆန်းဂျာမွန်း၊ အောင်ဆန်းဂျာမွန်း ဆိုပြီးတော့ အော်တဲ့ အခါကျတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သိပ်ပြီးတော့ သဘောကျလာတယ်” ဟု ဦးမြတ်လှက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိ ပန်းလှိုင် ၂၃ လမ်းနှင့် သနပ်ပင်မြို့ မင်းလမ်းတို့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အောင်ဆန်းဂျာမွန်း စာကြည့်တိုက် များတွင် စာအုပ်ပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော်ရှိကြကာ ပဲခူးဒေသခံများမှ လှူဒါန်းသည့် စာအုပ်များ
ဖြစ်သည်ဟု ဦးမြတ်လှက ပြောသည်။ စာကြည့်တိုက် တခုစီအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကျပ်ငွေ ၁ဝ သိန်းကျော် ဖြစ်သည်။
စာအုပ်များတွင် NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်ရေးသည့် “ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ” ကဲ့သို့သော စာအုပ်အများ အပါအဝင် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ဝတ္ထုစာအုပ်များလည်း စာကြည့်တိုက်တွင် ထားရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပဲခူးတိုင်း စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲ အတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးမြတ်လှမှ ဦးစီးကာ ပဲခူးတိုင်း NLD လူငယ်များမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ဦးမြတ်လှက ဆိုသည်။
“လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပဲခူးလူငယ်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ဒီမှာ အကုန်လုံး စီစဉ်ထားပြီးပြီ လုံခြုံရေးက သူတို့ဆီကလည်း ပါလာမယ် ကျနော်တို့ဆီကလဲ တထပ် ထပ်ဝိုင်းမယ် လုံခြုံရေးကလည်း ကျနော်တို့ အားလုံး စီစဉ်ထားပြီးပြီ ဘယ်တော့ လာမယ်ဆိုတာသာ မသိသေးတာ ” ဟု ဦးမြတ်လှက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်လာအပြီး နေအိမ်ပြင်ပ ခရီးစဉ်များ အဖြစ် ယခုလ ၄ ရက်နေ့ကလည်း ပုဂံရှေးဟောင်းမြို့တော်သို့ ၄ ရက်ကြာ မိသားစု ဘုရားဖူးခရီး သွားခဲ့သေးသည်။
ဈေးသူဈေးသားများနှင့် ဒေသခံ ၃,၀၀၀ ကျော်တို့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
“အခုလည်း ကျနော့်ကို လာမလား လာမလားနဲ့ တော်တော်လာမေးနေကြတယ်ဗျ၊ စည်းရုံးရေး သဘောလည်း ပါမှာပေါ့ဗျာအခုတည်းက ကျနော့်ကို လာမေးနေကြတာ အဲဒီနေ့လည်း ဘယ်လောက်လာမလဲမှ မသိတာ၊ အခုတည်းက သူတို့က ရွစိရွစိနဲ့ ဖြစ်နေကြပြီ” ဟု ဦးမြတ်လှက ဆိုသည်။
ယင်းအဖွဲ့ကြီးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတွေမှာ ပြည်တွင်းဥပဒေတွေ၊ မူဝါဒတွေ ရှိနေပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဟန့်တားထားတာ၊ တင်းကျပ်သည့် တားမြစ်ချက်တွေရှိနေတာ ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပူး ပေါင်းပါဝင်မှုကို မရခဲ့ဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာကာ ငလျင် လှုပ်၊ မုန်တိုင်းတိုက်၊ ရေကြီး၊ မိုးခေါင် စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို ခံစားနေရကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်ကို အခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ ကနေ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ အခု တကြိမ် ခေါ်ယူမယ့် လွှတ်တော်ဟာ အထူး အစည်းအဝေး ဖြစ်တဲ့အတွက် လွှတ်တော် အမတ်တွေကို ၁၅ ရက် ကြိုတင် ဖိတ်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် လွှတ်တော်မှာ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင် အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာထူး ခန့်အပ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ မူကြမ်းကို အဓိက ဆွေးနွေးဖွယ် ရှိတယ်လို့ လွှတ်တော် အမတ် တဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အားနည်းချက်တွေနဲ့ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွေ အတွက် အကြံပြုချက် ပါဝင်တဲ့ စာတမ်း တစောင်ကို ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေပါတီများ အဖွဲ့ဝင် ၉ ပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေ စုပေါင်းပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံ ဒီကနေ့ ပေးပို့လိုက်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းတင်အောင်က ပြောပါတယ်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေကို အဆင့်ဆင့်မှာ အဓိက လိုက်နာနိုင်အောင် ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာတော့ တည်ဆဲ နိုင်ငံရေး ပါတီ ၃၇ ဦးက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူတွေ နေပြည်တော်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်တွေ့ဆုံဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခင်ဦးသာ Monday, 25 July 2011 17:47
ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲများကြောင့် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အရပ်သား အများအပြား လိုင်ဇာ၊ မိုင်ဂျာယမ် စသည့် ဒေသများသို့ ထပ်မံ ထွက်ပြေးနေကြကြောင်း သိရသည်။
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ( KIA) ထိန်းချုပ်ရာ လိုင်ဇာဒေသတ၀ိုက်သို့ သွားရောက် ခိုလှုံသူ ၁၆၀၀၀ ကျော် ရှိနေရာမှ ယခု အရေအတွက် နှစ်သောင်းဝန်းကျင် ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက် အတွင်းမှာ ဗန်းမော်ဒေသ နဲ့ မြစ်ကြီးနားဘက်က ဒုက္ခသည်တွေ ထောင်ချီပြီး ထွက်ပြေးလာကြတယ်” ဟု လိုင်ဇာရှိ ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုလာရစ်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
စစ်ပြေးသူများထဲတွင် ပူတာအိုခရိုင်၊ မိုးညှင်းခရိုင်တို့မှ ပြည်သူများလည်း ပါဝင်သည်ဟု ကိုလာရစ်က ဆက်ပြောသည်။
စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအတွက် KIA အပါအ၀င် ဒေသခံအဖွဲ့တချို့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့ တချို့က လုပ်ဆောင်ပေးနေသော်လည်း နေထိုင် စားသောက်ရေးအတွက် ခက်ခဲနေကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ၏ အကူအညီများ မရရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ယူနန်ပြည်နယ် အာဏာပိုင်တို့က ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆေးဝါးတချို့ လှုဒါန်းခဲ့ကြောင်း ကိုလာရစ်က ဆိုသည်။
ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နှင့် ၂၀ တို့၌ လိုင်ဇာမြို့ အနောက်ဘက်ရှိ ကေအိုင်အေ စခန်းတခုသို့ အစိုးရတပ်က အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီး နောက်ပိုင်း ထိုဒေသရောက် ဒုက္ခသည် အများအပြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးကြရာ တရုတ်အာဏာပိုင်များက လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဤအတောအတွင်း အစိုးရတပ်က ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် အတွင်းမှ ဂါးရာယန်၊ ကဇူး၊ တဘတ်ချောင်း စသည့် ကျေးရွာတို့တွင် နေထိုင်သူများအား ရွာမှ ထွက်ခွာကြရန် အမိန့်ထုတ်ထားသည်ဟု သိရကြောင်း KIA ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“အိမ်ခြေ တထောင်ကျော် ၀န်းကျင် ရှိပါတယ်၊ ဒီလူတွေကို ဒီနေ့ အပြီး ရွာကနေ ဖယ်ခိုင်းထားတယ်၊ မြေလှန် စစ်ဆင်ရေး လုပ်တဲ့ သဘော ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးလနန်က ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကုန်ပိုင်းက KIA နှင့် မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ တကြိမ် တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့သော်လည်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် သဘောတူညီမှု မရကြသေးပေ။
“အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့် ဘာမှ ရေရေရာရာ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ ဒီရက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်နေဆဲပါ၊ အစိုးရဘက်က စစ်ဆင်ရေးတွေ ဆက်တိုက် လုပ်လာပါတယ်”ဟု ဦးလနန်က ဆက်ပြောသည်။
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အစိုးရက KIA သို့ စာတစောင် ပို့လာပြီး ထိုစာတွင် ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြအနေများအတွက် ဆွေးနွေးရန် ရေးသားထားကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့က တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ချင်တယ်၊ သူတို့က ကချင်ဒေသ တခုပဲ လုပ်ချင်နေတယ် ဆိုတော့ သဘောတူညီမှု မရသေးဘူးပေါ့” ဟု ဦးလနန်က ဆိုသည်။
စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရက အဓိက လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ KIA ကမူ ခိုင်မာသော အာမခံချက်များ ရနိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုအစိုးရ ကိုယ်စားပြုသူများနှင့်သာ ဆွေးနွေးလိုကြောင်း ဦးလနန်က ရှင်းပြသည်။
KIA သည် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် အခြေစိုက် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်လတွင် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာသည်။
YANGON (Reuters) - Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi heldarare meeting withagovernment minister on Monday, raising the prospect ofathaw in relations between the Nobel Peace laureate and the country's new military-backed leadership.
Nyan Win,aspokesman for the National League for Democracy (NLD), Suu Kyi's active but officially disbanded party, said the political climate had changed and the government's invitation to Suu Kyi indicated some progress.
Suu Kyi has been careful not to antagonise the government since her release and did not criticiseaNovember7election regarded at home and abroad asasham that ensured the same regime stayed in power behindaveneer of democracy.
Analysts say the government is aware that any move against Suu Kyi would anger the international community and rule out the possibility of Western sanctions being lifted in the near future.
Christopher Roberts,aSoutheast Asia specialist at Australian National University, said the meeting was probably more thanapublicity stunt.
Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa, right, and U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton shake hands after their joint press conference ataJoint Commission meeting between the two countries at the Ayodhya Hotel in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Sunday, July 24, 2011. Photo: Saul Loeb, Pool / AP
BALI, Indonesia (AP) — U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton is urging Indonesia to promote democracy in Myanmar and countries in the Middle East and North Africa in the throes of upheaval. She says its successful transition from dictatorship and status asavibrant Muslim-majority democracy make it an ideal role model for both Myanmar and the Arab world.
ဟီလာရီ ကလင်တန် နဲ့ မာတီ နာတာလေဂါဝါ